ILake Roslagen kufuphi neÖregrund Östhammar. Isikhephe.
Apha iRoslagen idibana namava endalo, ubomi bolwandle kunye nokuqubha kunye neendawo ezininzi zohambo. I-Tvärnö ilungele iintsapho ezinabantwana okanye ezingenabo abantwana abafuna indawo yokuhlala etofotofo kunye nezilwanyana zasendle ezingaqhelananga ngokupheleleyo. Yiya niyoqubha. Yiza nentonga yokuloba kwaye ubone ukuba inhlanhla yokuloba yanele yonke indlela eya kwi-grill. Ventilate ehlathini nakwimizila yendalo. Thenga amaqanda kunye netakane kumfama. Phumla emlilweni, dlala imidlalo kunye nobudlelwane. Sebenza ixesha elithile ngokuthula nangokuzola kwi studio. Thatha ithuba kwibala legalufa okanye uthenge i-ice cream e-Öregrund.
Indlu entle ehlaziyiweyo, eqaqambileyo nevulekileyo eneembono zechibi kunye ne-60's / 70's ivakale ishiywe. Amagumbi okulala athokomileyo, amakhulu, ikhitshi langoku / igumbi lokuhlala elinesitovu esibaswa ngamaplanga kunye nokufikelela kwiibhalkhoni ezimbini kunye neholo elinegumbi lokuhlambela elitsha kunye nekhabhathi encinci ejonge echibini. Ijethi encinci yexesha lekofu, encinci, isikhephe esidala kunye neCanada ekhoyo.
Kwistudiyo esandula ukwakhiwa kukho ibhedi / isofa, itafile enkulu enendawo yokuhlangana okanye imfihlo yomsebenzi weofisi. Nangona kunjalo, kuyafuneka ukuba ube ne-broadband yakho yeselula. Kukho abamelwane ababini ngoko ngamanye amaxesha unokuva ingxolo evela kubantwana abadlalayo, becheba ingca okanye okufanayo. Ngaphandle koko, indawo izolile kakhulu.
Kufuphi nendalo kunye nechibi. Ulwandle lukamasipala olugqwesileyo ngaphaya kwe-bay (1 km ngesikhephe okanye ngesikhephe. Ngemoto malunga ne-12 km). Amathuba amahle okuloba okanye ukuqubha kwii-cobs kunye ne-skerries. Ukuhlala emaphandleni kunye neendlela ezintle zendalo. EMellangården ungarenta isikhokelo sokuloba kwaye uthenge amaqanda, inyama kunye nezinye iimveliso. I-Öregrund Golf Club ikumgama weekhilomitha ezili-15. Idolophu yasehlotyeni yase-Öregrund eneendawo zokutyela kunye nokuhamba ngesikhephe (kunye neenkampani zenkqubo) ikumgama oziikhilomitha ezingama-25. I-Östhammar enezindlu ezisisigxina kunye nethala leemoto elikhulu, elisanda kulungiswa kwakhona likumgama weekhilomitha ezingama-25. Le ndawo idume ngokugcinwa kwayo kwentsimbi, umzekelo eForsmark, eLövsta mill naseÖsterbybruk. Abatyeleli abancinci banokuxabisa ichibi le-adventure eBerkinge (malunga neekhilomitha ezingama-40) okanye iFuruvik Zoo (malunga neekhilomitha ezili-100).
Ndifumana iindwendwe ngokobuqu kwaye emva koko ndifowunelwe ngefowuni / nge-imeyile ukuba kuyimfuneko.